TK4100 Chip ကဒ်, TK4101 Chip ကဒ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို
EM ကဒ် / LF Card ကို 125kHz သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို, Access Control 125KHz ID Card, Access Control 125KHz Smart ID Card, Access Control Identification Card, Access Control LF Smart ID Card, Low Frequency Identification Card, TK4100 Chip ကဒ်, TK4101 Chip ကဒ်
chip: TK4100 / TK4101, EM4102 နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်
ပြည်တွင်းနံပါတ်စဉ်:5bytes
အထူကဒ်: 85.5× 54 × 1.80mm (တစ်ဦးခရီးဆောင်အပေါက်နှင့်အတူ)
R / W ကိုအကွာအဝေး: 2~ 10cm, စာဖတ်သူနှင့်လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်.
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: PVC / PET / PETG / ကို ABS / အမ် / PC ကို / စက္ကူ,စသည်တို့ကို.
The surface can be sprayed with 18 သို့မဟုတ် 10 ဂဏန်း, 8 ဂဏန်း, can be made intoaportable thick card, can be with holes. Print portrait photos, can also be made into keychain, silicone wristband or various shape tags, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူစနစ်များ, access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်, patrol systems, တဦးတည်းကတ် Solutions, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product TK4100 Chip Card, TK4101 Chip ကဒ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို
prev: EM4102 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4200 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: EM4450 Chip ကဒ်, EM4550 Chip ကဒ်